निकै आकर्षक बनेर आयो सगुनको डेस्कटप संस्करण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
निकै आकर्षक बनेर आयो सगुनको डेस्कटप संस्करण
डिसी नेपाल , १ बैशाख २०७५
वासिङटन। सोसियल इकमर्श प्लेटफर्म सगुनले आफ्नो मोवाइल एपपछि डेस्कटप संस्करणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । डेस्टक प्रयोगकर्ताहरुले पनि सहज रुपमा सगुनको प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले ब्राउजरमा आधारित डेस्कटप संस्करण ल्याइएको सगुनले जनाएको छ । ‘मोवाइलसँगै डेस्कटपबाट सामाजिक संजाल चलाउने प्रयोगकर्ताको संख्या ठूलो छ’ सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले भने ‘तिनै प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी डेस्कटप संस्करण ल्याइएको हो ।’
पछिल्लो डेस्कटप संस्करण पहिलेको संस्करणभन्दा निकै आकर्षक बनाइ र थप सुविधासहित ल्याइएको सगुनले जनाएको छ । हाल सगुनका २० लाख प्रयोगकर्ताहरु छन् । यी प्रयोगकर्ताहरुले मोवाइलबाट सगुनको प्रयोग गर्दै आएकोमा डेस्कटप चलाउने प्रयोगकर्ताहरुको निरन्तरको आग्रहपछि डेस्कटप संस्करण ल्याइएको हो ।
सगुनले आफ्नो नविन प्रयोग अन्तर्गत सोसल स्मार्ट कार्डको विकासलाई निरन्तरता दिँदै सन् २०१८ को अन्त्यसम्म बजारमा आउने लक्ष्य लिएको छ। स्मार्ट कार्डको सहयोगले बजारमा सामान किन्दा पैसा कमाउन मद्दत गर्दछ, कुपन देखाएर छुट पाउन सकिन्छ तथा आफ्ना प्रियजनलाई उपहार पनि दिन सकिन्छ । सगुनले यसै वर्ष आइओएस् एप जारी गर्नका लागिसमेत काम गरिरहेको छ। ३ सय अर्ब डलरको सोसल कमर्स बजारमा सोसल स्मार्ट कार्ड र आइओएस् एपले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने सगुनको विश्वास छ।
सगुनले यस वर्षकै जनवरीमा सफल रुपमा एन्ड्रोइड मोबाइल एपको सुरुवात गरेपछि अहिले डेस्कटप संस्करण आएको हो । यो अवधिमा सगुनको एन्ड्रोइड एप ९ लाख १५ हजारभन्दा बढीपटक डाउनलोड भैसकेको छ। एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता तथा वेबको प्लेटफर्मका प्रयोगकर्तासमेत गरेर सगुनका कुल २० लाख प्रयोगकर्ता भइसकेका छन् । अहिले उपलब्ध सामाजिक सञ्जालमा भन्दा राम्रो अनुभव खोजिरहेका अन्य सामाजिक सञ्जालका २ अर्ब ८० करोड प्रयोगकर्ताहरु मध्येबाट सगुन प्रयोगकर्ताहरुको हिस्सा बढिरहेको छ।
यसैबीच सगुनमा लगानी गर्न चाहनेहरुका लागि यही मे महिना अन्तिम अवसर भएको जनाइएको छ । सगुनले निष्काशन गरेको शेयर किन्ने अवधि यही मे महिनाको अन्त्यसम्म मात्र रहेको बताइएको छ । सगुनले मिनि आइपिओमार्फत १ वर्षको लागि शेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएको थियो । यो अनुमति जुन २०१८ मा सकिने भएकोले यो सगुनमा लगानी गर्ने अन्तिम अवसर भएको सगुनका सहसंस्थापक कविन्द्र सिटौलाले जनाए । शेयर निष्कासन सम्बन्धी जानकारी सगुनको वेबसाइट www.sagoon.com/invest मा हेर्न सकिन्छ ।